က်န္းမာေရးအတြက္ေအးစက္လွတဲ့ အေအးခန္းထဲကို Two Piece ဝတ္စုံနဲ႔သာဝင္ေရာက္ခဲ့ရတဲ့ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ – XB Media Myanmar
က်န္းမာေရးအတြက္ေအးစက္လွတဲ့ အေအးခန္းထဲကို Two Piece ဝတ္စုံနဲ႔သာဝင္ေရာက္ခဲ့ရတဲ့ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္
December 11, 2018 Bestie_Author
မင္းသမီးေခ်ာေလး သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ကေတာ့ လက္ရွိမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ကို မင္းသား ညီထြဋ္ေခါင္နဲ႔အတူ ေရာက္ရွိေနတာ ေတ့ြရပါတယ္။ ဒီေန႔ေန႔လည္မွာပဲ သင္ဇာတို႔သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္က ဘန္ေကာက္က နာမည္ႀကီးေဆး႐ုံတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ” Apex Medical Center ” ကိုသြားေရာက္ၿပီး ေဆးကုသမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ က်န္းမာေရးအတြက္ သင္ဇာက ေအးစက္လွတဲ့ အေအးခန္းထဲကို Two Piece ဝတ္စုံနဲ႔သာ ဝင္ေရာက္ခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲ့ဒီေနာက္မွာ သူမတို႔ႏွစ္ေယာက္က အေတြ႕အႀကဳံေတြကို ျပန္လည္ဖလွယ္ရင္း အင္တာဗ်ဴးေလးေတြလည္း ႐ိုက္ကူးခဲ့ၾကပါေသးတယ္။ ဂ်ာမန္နည္းပညာနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ Ice Lab ကို ဝင္ေရာက္တဲ့အခါမွာ သင္ဇာက Bikini ဝတ္စုံေလးကို ဝတ္ဆင္ၿပီး ဝင္ေရာက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ပရိသတ္တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေဝဖန္မႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့တာလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ကဲ ခ်စ္ပရိသတ္ေတြအတြက္ သင္ဇာနဲ႔ ညီထြဋ္ေခါင္တို႔ရဲ႕ပုံရိပ္ေလးေတြကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
မင်းသမီးချောလေး သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ လက်ရှိမှာ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ကို မင်းသား ညီထွဋ်ခေါင်နဲ့အတူ ရောက်ရှိနေတာ တေ့ွရပါတယ်။ ဒီနေ့နေ့လည်မှာပဲ သင်ဇာတို့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်က ဘန်ကောက်က နာမည်ကြီးဆေးရုံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ” Apex Medical Center ” ကိုသွားရောက်ပြီး ဆေးကုသမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက် သင်ဇာက အေးစက်လှတဲ့ အအေးခန်းထဲကို Two Piece ဝတ်စုံနဲ့သာ ဝင်ရောက်ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘန်ကောက်အထိ လေယာဉ်စီးပြီးသွားရောက်ခဲ့တဲ့ သူမတို့နှစ်ယောက်က Ice Lab လို့ခေါ်တဲ့ အအေးငွေ့တွေ ဆက်တိုက်ထွက်ရှိနေတဲ့ အအေးခန်းထဲကို ဝင်ရောက်ပြီး ကုသမှုခံယူခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဇာက သူမရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုတော့ facebook မှာ ပုံလေးတွေနဲ့အတူ ” Re energizing myself. Enjoying the amazing ice lab by German Technology. LOVE it ” ဆိုပြီး ပြန်လည်ဝေမျှထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက်မှာ သူမတို့နှစ်ယောက်က အတွေ့အကြုံတွေကို ပြန်လည်ဖလှယ်ရင်း အင်တာဗျူးလေးတွေလည်း ရိုက်ကူးခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ဂျာမန်နည်းပညာနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ Ice Lab ကို ဝင်ရောက်တဲ့အခါမှာ သင်ဇာက Bikini ဝတ်စုံလေးကို ဝတ်ဆင်ပြီး ဝင်ရောက်ခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တစ်ချို့ကတော့ ဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ကဲ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် သင်ဇာနဲ့ ညီထွဋ်ခေါင်တို့ရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။